Ukuphumla elubabalweni-Ithiyetha yasekhaya echibini! - I-Airbnb
Ukuphumla elubabalweni-Ithiyetha yasekhaya echibini!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRichelle
Intle kwaye Iqaqambile! Icocekile kwaye itofotofo! Ukuphumla KuGrace yinto efihlakeleyo omele uyonwabele! Igumbi Elitsha Leemuvi Ngoku Liqukiwe! Efumaneka kwiGrace Lake kufutshane neBemidji, MN, ungakhetha ukuphumla uze uphumle okanye ubuke iindawo ezonwabisayo, enoba utyelela eliphi ixesha lonyaka! Kwakhona jonga indlu yethu kwiPotato Lake! https://www.airbnb.com/h/theeaglesnestlakehouse
Xa sithatha isigqibo sokwenza eli khaya lihle le-4/2 libe yindawo yokuqasha ngeholide, besicinga ngawe! Sizamile ukucinga ngazo zonke iinkcukacha ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kwaye kukhululeke. Ikhaya lilala ukuya kuthi ga kwi-9, kunye neendlela zokulala ezongezelelweyo zabantu aba-2-3 abongezelelweyo abakhoyo kwigumbi le-movie ngesaziso sangaphambili. Iindwendwe zethu ziyakwazi ukufikelela kwi-intanethi enesantya esiphezulu, iXbox, iSmart TV's kwigumbi lokulala ngalinye, indawo yokubeka igesi yokuphekela ngaphandle, indawo yokubeka umlilo, idokhi yokuloba kwiinyanga zasehlotyeni.
Igumbi lomboniso bhanya-bhanya lixhotyiswe ngesandi esijikelezileyo, iXbox, i-smart TV, kunye neCable. Kukwakhona ubungakanani bokumkanikazi owongezelelweyo uMurphy wakhupha ibhedi ngesaziso sangaphambili.
Ifumaneka ngokuthe ngqo kwi-Grace Lake, kwaye kuphela ngamanyathelo okuya emanzini, ikhaya likwisitrato esithe cwaka, sisuka kwindlela ebethwe, inabamelwane abanobuhlobo kodwa babucala.
Ngenxa yokuba baninzi abahlali abahlala kulo nyaka ubumelwane, kuyimfuneko ukuyihlonela imeko-bume yosapho kunye nendawo ezolileyo. Akusayi kubakho maqela avunyelweyo okanye anyanyezelwe. Akukho mculo ungxolayo ngaphandle, kwaye ziimoto ezi-3 kuphela eziya kuba nendawo yokupaka. Ukugcina imisebenzi yangaphandle kwinqanaba lencoko eqhelekileyo iya kubaluleka ngakumbi emva kwe-8pm. Enkosi kakhulu ngoncedo lwakho ekugcineni ubumelwane buyamangalisa kwaye siqinisekise ukuba siya kuqhubeka nokuvunyelwa ukurenta iminyaka ezayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Richelle
I am a wife and mom of 5 awesome kids! We own and operate a Commercial Electrical Contracting company out of Lakeland FL, and we love to travel and make memories with our family!
Nangona ndingangafumaneki ngokobuqu, ndisoloko ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi! Nceda uzive ukhululekile ukufikelela kuyo nayiphi na imibuzo okanye inkxalabo onokuba unayo! Ukuba kukho into efunekayo emntwini, ndinabantu abaliqela abanokuncedisa kwinto oyifunayo ngokukhawuleza!
Nangona ndingangafumaneki ngokobuqu, ndisoloko ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi! Nceda uzive ukhululekile ukufikelela kuyo nayiphi na imibuzo okanye inkxalabo onokuba unayo!…